Arthdal Chronicles (2019)[စ / ဆုံး] – Channel Myanmar Share
Original name아스달 연대기
Created byKim Won-seok, Kim Young-hyun, Park Sang-yeon
StarringCho Byeong-kyu, Cho Seong-ha, Jang Dong-gun, Kim Eui-sung, Kim Ji-Won, Kim Ok-bin, Ko Bo-Gyeol, Park Byung-eun, Park Hae-joon, Song Joong-ki, Teo Yoo
Synopsis of Arthdal Chronicles (2019)[စ / ဆုံး]
ကဲအားလုံး​မျှော်​တလင့်​လင့်​ဖြစ်​​နေကြတဲ့ oppa Song Joong-Kiနဲ့ unnie Kim Ji-Wonတို့ရဲ့ ​ခေတ်​ဦးကဒီဇိုင်းလန်းလန်း​တွေနဲ့ပုံ​ဖော်​ထားတဲ့ Arthdal Chronicles ဆိုတဲ့ကား​လေး လာပါပြီ​​နော်​….
​ကမ္ဘာ့​ခေတ်​ဦးအချိန်​အခါတုန်းက​တော့ လူသားတွေမှာ နိုင်​ငံ တိုင်းပြည်​ ဘုရင်​ဆိုတာ​တွေမရှိကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်း မီး ဓားသွား လက်​နက်​နဲ့ ထွန်​ယက်​စိုက်​ပျိုးနည်း​တွေကိုသိလာတဲ့လူသား​တွေဟာ ​လောကကြီးကိုစိုးမိုးဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်​။
Eunsun ဆိုတဲ့က​လေး​လေးဟာ နိမိတ်​ဆိုးနဲ့​မွေးဖွားလာပြီး ကျိန်​စာသင့်​​နေတယ်​လို့ သတ်​မှတ်​ခံထားရတာ​ကြောင့်​ ဒီက​လေးရဲ့ရှင်​သန်​မှုအတွက်​ Arthdalမြို့သူမိခင်​ဟာ ခက်​ခက်​ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရတာပါ…..
တာဂွန်​ က​တော့ Arthdal မြို့ကစစ်​သူကြီးတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး အသက်​ငယ်​ရွယ်​စဉ်​က​တည်းက ထက်​မြတ်​သူတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး Arthdal မြို့ကို ​အောင်​မြင်​မှု​တွေ​ဆောင်​ကြဉ်း​ပေးသူတစ်​ဦးလဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သူ့ရဲ့အိမ်​မက်​က​တော့ Arthdalရဲ့ ဘုရင်​ဖြစ်​လာဖို့ပါပဲ။
Wahan မျိုးနွယ်​စုရဲ့ ဆက်​ခံသူတစ်​ဦးဖြစ်​​ပေမယ့်​ ခက်​ခဲမှု​တွေကို​ကျော်​လွှားရသူ Tan-Ya က​တော့ Eunsunရဲ့အချစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး တာဂွန် ချစ်​မြတ်​နိုး​တဲ့သူလဲဖြစ်​ပါတယ်​။
Wahan မျိုးနွယ်​စုရဲ့ ဆက်​ခံသူ Tanya နဲ့
Asdal ရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်​မ Tae Al-ha တို့ကြားထဲက
ရည်​မှန်းချက်​​တွေ အခက်​အခဲ​တွေဝိုင်းရံ​နေတဲ့ ပြိုင်​ဆိုင်​မှု​တွေကြားထဲက
​အချစ်​ ကံကြမ္မာနဲ့ အားပြိုင်​တိုက်​ခိုက်​မှု​တွေကို တခြားDrama ​တွေနဲ့လုံးဝကွဲထွက်​ပြီးမြင်​ရမှာဖြစ်​တဲ့အပြင်​
ပရိတ်သတ်​အချစ်​​တော်​ နာမည်​ကြီးမင်းသားနှစ်​လက်​ဖြစ်​တဲ့ Song Joong-Ki နဲ့ Jang Dong-Gunတို့ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်​ဆန်​ အားပြိုင်​မှုမြင်​ကွင်း​တွေကိုလဲ ​တွေ့ရမှာမို့
အပတ်စဉ် စ​နေ တနင်္ဂနွေနေ့ ညတိုင်း ​စောင့်​ကြည့်​ဖို့မ​မေ့သင့်​တဲ့ drama ​ကောင်း​လေးတစ်​ခုအဖြစ်​ ညွှန်းဆိုလိုက်​ပါတယ်​​နော်​…
Main cast အဖြစ်​ ပါဝင်​ထားသူ​တွေက​တော့
Eun- Sum အဖြစ်​ Song Joong-Ki
Ta-Gon အဖြစ်​ Jang Dong-Gun
Tan-Ya အဖြစ်​ Kim Ji-Won
Tae Al-ha အဖြစ်​ Kim Ok-vin စတဲ့ ပရိတ်​သတ်​နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား နာမည်​ကြီးသရုပ်​​ဆောင်​များပဲဖြစ်​ပါတယ် ။
(အညွှန်းရေးသားထားသူကတော့ Lwinlwin Aung ဖြစ်ပါတယ်)
ကဲအားလုံးမြှျောတလငျ့လငျ့ဖွဈနကွေတဲ့ oppa Song Joong-Kiနဲ့ unnie Kim Ji-Wonတို့ရဲ့ ခတျေဦးကဒီဇိုငျးလနျးလနျးတှနေဲ့ပုံဖျောထားတဲ့ Arthdal Chronicles ဆိုတဲ့ကားလေး လာပါပွီနျော….
ကမ်ဘာ့ခတျေဦးအခြိနျအခါတုနျးကတော့ လူသားတှမှော နိုငျငံ တိုငျးပွညျ ဘုရငျဆိုတာတှမေရှိကွပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့တဖွညျးဖွညျး မီး ဓားသှား လကျနကျနဲ့ ထှနျယကျစိုကျပြိုးနညျးတှကေိုသိလာတဲ့လူသားတှဟော လောကကွီးကိုစိုးမိုးဖို့ကွိုးစားကွပါတယျ။
Eunsun ဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာ နိမိတျဆိုးနဲ့မှေးဖှားလာပွီး ကြိနျစာသငျ့နတေယျလို့ သတျမှတျခံထားရတာကွောငျ့ ဒီကလေးရဲ့ရှငျသနျမှုအတှကျ Arthdalမွို့သူမိခငျဟာ ခကျခကျခဲခဲကွိုးစားခဲ့ရတာပါ…..
တာဂှနျ ကတော့ Arthdal မွို့ကစဈသူကွီးတဈဦးဖွဈပွီး အသကျငယျရှယျစဉျကတညျးက ထကျမွတျသူတဈဦးဖွဈပွီး Arthdal မွို့ကို အောငျမွငျမှုတှဆေောငျကွဉျးပေးသူတဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့အိမျမကျကတော့ Arthdalရဲ့ ဘုရငျဖွဈလာဖို့ပါပဲ။
Wahan မြိုးနှယျစုရဲ့ ဆကျခံသူတဈဦးဖွဈပမေယျ့ ခကျခဲမှုတှကေိုကြျောလှားရသူ Tan-Ya ကတော့ Eunsunရဲ့အခဈြဦးဖွဈပွီး တာဂှနျ ခဈြမွတျနိုးတဲ့သူလဲဖွဈပါတယျ။
Wahan မြိုးနှယျစုရဲ့ ဆကျခံသူ Tanya နဲ့
Asdal ရဲ့ပထမဆုံးဘုရငျမ Tae Al-ha တို့ကွားထဲက
ရညျမှနျးခကျြတှေ အခကျအခဲတှဝေိုငျးရံနတေဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုတှကွေားထဲက
အခဈြ ကံကွမ်မာနဲ့ အားပွိုငျတိုကျခိုကျမှုတှကေို တခွားDrama တှနေဲ့လုံးဝကှဲထှကျပွီးမွငျရမှာဖွဈတဲ့အပွငျ
ပရိတျသတျအခဈြတျော နာမညျကွီးမငျးသားနှဈလကျဖွဈတဲ့ Song Joong-Ki နဲ့ Jang Dong-Gunတို့ရဲ့ ဒဏ်ဍာရီဆနျဆနျ အားပွိုငျမှုမွငျကှငျးတှကေိုလဲ တှရေ့မှာမို့
အပတျစဉျ စနေ တနင်ျဂနှနေေ့ ညတိုငျး စောငျ့ကွညျ့ဖို့မမသေ့ငျ့တဲ့ drama ကောငျးလေးတဈခုအဖွဈ ညှနျးဆိုလိုကျပါတယျနျော…
Main cast အဖွဈ ပါဝငျထားသူတှကေတော့
Eun- Sum အဖွဈ Song Joong-Ki
Ta-Gon အဖွဈ Jang Dong-Gun
Tan-Ya အဖွဈ Kim Ji-Won
Tae Al-ha အဖွဈ Kim Ok-vin စတဲ့ ပရိတျသတျနဲ့ရငျးနှီးပွီးသား နာမညျကွီးသရုပျဆောငျမြားပဲဖွဈပါတယျ ။
(အညှနျးရေးသားထားသူကတော့ Lwinlwin Aung ဖွဈပါတယျ)
File size__( 400 MB)
Translated by Lwinlwin Aung , ThinZar Htet, Hay Thar oo ,Shoon
Encoded by THZ, Phyo Pyae , NAL
Episode (1) 400 MB
Episode (2) 500 MB
GDrive / Openload / Megaup / Solidrive
Episode (3) 500 MB
Episode (4) 600 MB
Episode (5) 600 MB
Episode (6) 600 MB
Episode (7) 600 MB
Episode (8) 650 MB
Episode (9) 650 MB
Episode (10) 600 MB
Episode (11) 600 MB
Episode (12) 600 MB
Episode (13) 700 MB
Episode (14) 650 MB
Episode (15) 650 MB
Episode (16) 650 MB
Episode (17) 600 MB
Episode (18) 600 MB
Firt air date2019-06-01
Last air date2019-06-01
Home PageArthdal Chronicles (2019)[စ / ဆုံး]
Dark (2017) Season 1 [COMPLETE]